Ethical Hacking - Cracking the Hacker Mindset - Khit Minnyo
Hacking Knowledge Ethical Hacking - Cracking the Hacker Mindset
Ethical Hacking - Cracking the Hacker Mindset
by KhitMinnyo on September 09, 2017 in Hacking Knowledge
(၂) Hacker တွေနဲ့ malicious user တွေအကြောင်း အတိုချုပ်ရေးသားခြင်း။
(၃) Attacker တွေက သူတို့လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သတ်တာတွေကို ဘယ်လိုစိစစ်တယ်ဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
သင့် system ရဲ့ လုံခြုံရေးကို သုံးသပ်မှုတွေမစခင် သင့်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ လူတွေနဲ့ပတ်သတ်လို့ တစ်စုံတစ်ခု သင်သိချင်ကောင်းသိချင်ပါလိမ့်မယ်။ များစွာသော လုံခြုံရေးသတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ bad guys တွေရဲ့နှောက်ယှက်မှုကနေ system တွေကို ကာကွယ်ဖို့ တောင်းဆိုထားတာတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအဓိပ္ပါယ်က ဘာလဲ??? အဲဒီလူတွေဘယ်လိုတွေးတယ် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ သင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ???
Hacker တွေနဲ့ Malicious user တွေက သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ဘာတွေလုပ်တယ် ဘာတွေအကူအညီပေးတယ်ဆိုတာ သိနေရပါမယ်။ သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေက သင့်ရဲ့ information system အသစ်အပေါ်ကို ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာကိုလည်း နားလည်ရပါမယ်။ ဒီအခန်းမှာ သင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Hacker တွေရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ လူတွေတကယ်ပြုလုပ်နေတဲ့ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနည်းလမ်းတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ ဒါတွေက သင့်ရဲ့ Ethical hacking test တွေအတွက် ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။
လူအများသိမြင်နားလည်လာတာက Hacker တွေဟာ အန္တရာယ်ကင်းတဲ့သူတွေအဖြစ်ကနေ malicious criminal အဖြစ် ပုံစံပြောင်းသွားပြီလို့ထင်ကြပါတယ်။ Hacker တွေရဲ့ သဘောသဘာဝကလည်း လူတွေကသူတို့ကို အထင်အမြင်လွဲမှားနေတာကနေ မဖြေရှင်းကြပါဘူး။ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ Hacker တွေဟာ အဖြစ်မှန်ထက် အထင်လွဲခံနေရခြင်းအပေါ်မှာ အခြေခံနေကြရပါတယ်။ အဲဒီအထင်လွဲခံရခြင်းကနေ အငြင်းပွားမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားလာပါတော့တယ်။
Hacker တွေကို သူတို့ရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကနေ အမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ အချို့ကတော့ သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကနေ ဗဟုသုတပိုတိုးအောင် ရှာဖွေကြရုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဘက်မှာတော့ Hacker အချို့ဟာ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးနှောင့်ယှက်လိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာရယူလိုမှုပုံစံနဲ့ ရှာဖွေတတ်တာလည်းရှိပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ ထိုအကြောင်းအရာတွေကနေ Hacking ကို အကောင်းမြင်ရှုထောင့်ကနေ မကောင်းမြင်စေဖို့ အားပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်
သမိုင်းကြောင်းအရဆိုရင် Hacker တွေဟာ ဗဟုသုတနဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကြောင့် hack ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Hacker တွေဟာ စွန့်စားလိုသော ဆန်းသစ်တီထွင်လိုသောအတွေးအခေါ်တွေရှိကြပြီး ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ အားနည်းချက်ယိုဖိတ်မှုတွေကို ဖောက်ထွင်းရန် နည်းလမ်းသစ်တွေ ဖန်တီးဖို့ အမြဲကြိုးစားနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူတုိ့က program တစ်ခုမှာ code ပြောင်းသွားတာ ဒါမှမဟုတ် ခလုတ်တစ်ခု လွတ်သွားတာမျိုးနဲ့ cable ကြိုးတစ်ခုပြုတ်သွားရင် ဘာတွေဖြစ်မလဲ အဲလိုမျိုးတွေအမြဲတွေးနေရတာကို သဘောကျကြပါတယ်။ တွေးတောခြင်းက သူတို့အား နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကို ပြင်ဆင်တာနဲ့ အသစ်ပြန်လည်တပ်ဆင်တာမျိုးတွေကိုလည်း တိုးတက်စေပါတယ်။ မကြားသေးမီက ပိုမိုများပြားလာသော သက်သေတွေကနေ Hacker တွေဟာ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနဲ့ ငွေကြေဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်တွေထိအောင် hack နိုင်တယ်ဆိုတာ သက်သေပြလိုက်ပါပြီ။
ထိုကိစ္စတွေကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှ Hacker တွေရဲ့ အချင်းချင်းယှဉ်ပြိုင်မှုတွေဟာ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာပြီး video game တွေအပေါ်မှာလည်း ယုတ်မာတဲ့အသွင်ဆောင်လာကြပါတယ်။ ယခုဆို Hacker တွေက သူတို့ရဲ့ရန်သူတွေဟာ အီလက်ထရောနစ်တွေသာဖြစ်တယ်လို့ မြင်လာကြပါတယ်။
(malicious act) ဖျက်ဆီးနှောင့်ယှက်လိုသောပုံစံဖြင့် လုပ်ဆောင်ကြတဲ့ Hacker တွေဟာ wireless network, web application တွေနဲ့ virus စတဲ့ အချက်အလက်တွေကိုမကြည့်ဘဲ တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အပြုအမှုတွေက မကြာခဏဆိုသလို လူသားတွေဘဝဆိုးရွားသွားစေခြင်း၊ အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေခြင်းနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုအတွက် အန္တရာယ်ရှိခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်စေတာကို လျစ်လျူရှုထားကြပါတယ်။
အခြားတစ်ဘက်မှာတော့ ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်သမားများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ နိုင်ငံရေးသမားများ ဒါမှမဟုတ် လုပ်ငန်းအတိုင်ပင်ခံများက သင့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဖျက်ဆီးလိုသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်တာ အနည်းနဲ့အများတော့ ရှိနေပါတယ်။ ဒီလူတွေက ပုံမှန်လူတွေသုံးနေကျလမ်းစဉ်နဲ့ မထိုးဖောက်ကြပါဘူး။ ပြီးတော့ သူတို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုထားတဲ့အရာတွေကို ဖျက်ပစ်ခြင်း၊ ခိုးယူခြင်းနဲ့ ပြုပြင်တာတွေကိုလည်း ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ဒီအပြုအမူတွေကို မကြာခဏရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ကလည်း ခက်ခဲပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် သူတို့ကိုပေးထားတဲ့ အလုံးစုံယုံကြည်မှုတွေကို အသုံးချတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောသူများကို သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက် မဌားခင် ဒါမှမဟုတ် လက်တွဲဆောင်ရွက်မှုတွေ မပြုလုပ်ခင်ကတည်းက သူတို့သည်အမြဲထိုသို့သော လုပ်ဆောင်မှုများကို လုပ်လေ့ရှိနေတတ်ရင် အဲဒီလှုပ်ရှားမှုတွေက ထာဝရဖြစ်ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အတိတ်အပြုအမူက အနာဂတ်အပြုအမူရဲ့အကောင်းဆုံး နိမိတ်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ကတော့ မကောင်းတာတစ်စုံတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့ အရေးကြီတဲ့အရာတွေကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတာမျိုး မဟုတ်တာလည်းရှိပါတယ်။ မရိုးဖြောင့်သောသဘောကတော့ တစ်နေရာရာကနေ စတင်နေတတ်ပါတယ်။
အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ ချိုးဖောက်မှုတွေမှာ Hacker တွေနဲ့ Malicious user တွေဟာ တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေကို အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေ အသုံးချကြပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးမှာ Hacker တွေမရှိဘဲနဲ့တော့ သူတို့ရဲ့ကျူးကျော်မှုကို တားမြစ်တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေ၊ data ယိုဖိတ်မှုတွေကိုကာကွယ်ခြင်းတွေ ပေါ်ပေါက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲလိုနဲ့လည်းကမ္ဘာကြီးက ဆိုးရွားသွားမှာ မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကောင်းမွန်တဲ့လုံခြုံရေးနည်းပညာနဲ့ ထိုအပိုင်းတွေမှာ ခေတ်ရှေ့ပြေးနေတဲ့ နည်းပညာများလိုအပ်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ လုံခြုံရေးနည်းပညာဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းတွေက malicious user အကုန်လုံးနဲ့ Hacker တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို မကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါ။
တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့် ကွန်ပျူတာ system တွေကို ဖြုတ်ချဖို့၊ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ချောင်းကြည့်ဖို့၊ ပိတ်ပင်ထားတာတွေကို ထိုးဖောက်ဖို့နှင့် ပြဿနာပေါ်စေတဲ့ ဆော့ဝဲလ် (malware) ကို စတင်ဖန်တီးဖို့ အမြဲကြိုးစားနေပါလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သော ကျူးကျော်မှုတွေကနေ သင့်ရဲ့ system တွေကိုကာကွယ်ဖို့ သင့်လျော်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။
ဒီနေရာမှာ ကြားဖြတ် ပြောချင်တာလေး တစ်ခု ရှိနေပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ Hacking လမ်းကြောင်းပေါ် စလျှောက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကောင်းရာဘက်ကနေသာ လျှောက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း တွေးထားပါ။ White Hacker အဖြစ် ရောက်ရှိအောင် ကြိုးစားပါ။ လူကောင်းမဖြစ်ရင်တောင် လူဆိုးအဖြစ်မခံသင့်ပါဘူး။ အဲသည်မှာ ထပ်ပြောစရာရှိလာရပြန်ပါတယ်။ လူကောင်းဖြစ်အောင် (White Hacker) ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမှာပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ တွေးတဲ့အခါမှာတော့ လူဆိုးအတွေးသာ တွေးရပါလိမ့်မယ်။ (ရှုပ်ကုန်ပြီ ထင်တယ်နော်။ ခေတ်မင်းညို ဘာတွေလျှောက်ရေးနေလဲမသိတော့ဘူးလား) :)
ကဲ ဆက်ပြီး ရှင်းလိုက်ရအောင်
By KhitMinnyo on September 09, 2017
Labels: Hacking Knowledge
Janet Gatenby February 11, 2021 at 2:14 AM
I have been cheated on by my spouse and I needed to listen to my spouse live calls msg social media With only phone number, guess what? I got all of this done by anonymousmaskhat@gmail.com in the space of 1hour all thanks toavery reliable and honest hacker anonymousmaskhat@gmail.com